‘यसकारण मैले विवाह गर्ने निर्णय गरेँ, फागुन भित्रै हुन्छ विवाह’ : मनोज गजुरेल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 15, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on ‘यसकारण मैले विवाह गर्ने निर्णय गरेँ, फागुन भित्रै हुन्छ विवाह’ : मनोज गजुरेल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
उनले पुर्व पत्नी मिना ढकालसंग सम्बन्ध वि’च्छेद गरेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा त्यतीबेला लेखेको कुरा अहिले पनि त्यही मेरो धारणा हो भन्दै त्यसवारे थप केही नबोल्ने पनि बताए । उनको पहिलेको बिहे सफल नभएपछि मनोज र उनकी श्रीमती अलग बस्दै आएका थिए । मनोजले बिहे गर्ने थाहा पाएपछि मिना ढकालले फेसबुकमा आफ्ना भावना ब्यक्त गरेकी छिन् । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
गजुरेलले आफूले बिहे गर्न लागेको सत्य भएको बताए । उनले केटीको बारेमा थप खुलाउन भने चाहेनन् । अहिले तयारी भै रहेकाले सबै भन्न नमिल्ने भन्दै गजुरेलले समय आएपछि आफै पर्दा खुल्दै जाने बताए । उनले निकट भविश्यमै केटीको बारेमा कुरा सार्वजनिक गर्ने बताए । २०५३ सालमा प्रेम विवाह गरेका मनोज गजुरेल र मिना ढकाल कानूनी रुपमा अलग भएपछि एक अर्का प्रति आ’रोप लगाउने गरेका थिए ।
मनोज गजुरेलले विवाह बारे बोलेको कुरा भिडियोको ३४ मिनेटमा हेर्न सक्नुहुनेछ । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः